Barack Obama na-ekwu okwu banyere ihe nzuzo Apple | Esi m mac
Barack Obama na-ekwu maka ihe nzuzo Apple
Onye isi ala nke United States Barack Obama, agwawo onye editọ 'Texas Tribune' onye editọ Evan Smith na South site na Southwest (SXSW), ebe o lere anya n'esemokwu nke Apple na FBI. Agbanyeghị na Obama kwuru na ya enweghị ike ikwu okwu kpọmkwem banyere ọgụ ezoro ezo na-aga n'ihu n'etiti ha abụọ, mana o kwuru okwu gbasara nsogbu nzuzo na nchekwa. Obama dọrọ aka ná ntị megide na-ewere "absolutist" echiche na izo ya ezo ma kwuo na ụmụ amaala America ga-eme ohere edozi nchebe na nchebe.
O kwukwara na nche ọdụ ụgbọ elu dị ka ihe atụ nke nkwekọrịta na-eme n'etiti nchekwa na nzuzo. "Ọ dịghị fun obi ụtọ ịgafe na nchekwa," ka o kwuru, "mana anyị ghọtara na ọ dị mkpa."
Ajụjụ anyị kwesịrị ịjụ onwe anyị bụ ma na teknụzụ ọ ga-ekwe omume ịme ngwaọrụ ma ọ bụ sistemu a na-apụghị ịbanye na ya, ebe nzuzo ahụ siri ike nke na enweghị isi, enweghị ụzọ azụ, otu esi ejide nwatakịrị ahụ na-ese foto? Kedu ka anyị si edozi ma ọ bụ kwụsịtụ atụmatụ ndị na-eyi ọha egwu? Ọ bụrụ na gọọmentị enweghị ike ịbanye, onye ọ bụla na-eji ego ụlọ akụ Switzerland na-agagharị n’akpa ha. A ga-enwerịrị ụfọdụ ikike iji nweta ozi ahụ n'ụzọ ụfọdụ. Ndị mmadụ nọ n'akụkụ zoro ezo na-arụ ụka na ọnọdụ ọ bụla ọ dị, ọ nwere ike ịkwụsị iji ya na ngwaọrụ niile. Nke ahụ bụ ọdịdị nke usoro ndị a. Nke ahụ bụ ọrụaka ajụjụ. Abụghị m onye injinia ngwanrọ. Ọ bụ eziokwu, ma ọ nwere ike ikwubiga okwu ókè.
Obama kwuru na n'agbanyeghị na ọ chọrọ ijide n'aka na gọọmentị enweghị ike (ma ọ bụ na ọ chọghị) ịbanye n'ime iPhones gburugburu ụwa na-enweghị nlekọta, enwere "njedebe nke anyị na-etinye" na gbaa mbọ hụ na anyị biri n’ọha nchekwa na mmepeanya. Ọ kwadoro ịchọta nguzozi n'etiti izo ya ezo na nzuzo, na mkpa ọ dị gọọmentị inyocha mpụ.
Nkwubi okwu m bụ na ugbu a ị nweghị ike inwe echiche zuru oke na nke a. Yabụ ọ bụrụ na esemokwu gị siri ike izo ya ezo ọ dịghị mkpa, ọ naghị emetụta ụdị nguzozi anyị biri, ebe anyị na-atụle ekwentị anyị karịa uru ọ bụla ọzọ. Nke ahụ enweghị ike ịbụ azịza ziri ezi.
Barack Obama bịara ịjụ Jehova injinia ngwanrọ y ụlọ ọrụ teknụzụ nyere gọọmentị aka dozie nsogbu ahụ, ma kwuo na ọ chọrọ ihe ngwọta na izo ya ezo, tupu a chọọ ya nke ukwuu. Ọ dọrọ ndị obodo nka aka na ntị ka ha were ọnọdụ ahụ "Ọ bụghị adigide maka ọha na eze"dịka ọ nwere ike ibute nkwụsị nke ga-emecha mee ka iwu daa, nke a ga-agbanwekwa ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị mgbe ihe etinyere mere.
Apple O nwekwara opined na ajụjụ a, ebe ọ na-ekwu na ọ ga-egbo na Ndị omeiwu US. kama nke n'ụlọ ikpe. Nkwupụta President Barack Obama na-abịa dịka Apple na-eche ihu na gọọmentị United States n'ọgụ ihu ọha maka ihe a ga-achọ na Apple ga-enwe enyere ndị FBI aka unlock kpọghee ekwt iPhone, I nwere ike ịgụ ya na nke a njikọ. Ke adianade do, ị na-jụrụ unlock kpọghee ekwt a iPhone site na-eke ọhụrụ software uzo paswọọdụ mgbochi na ngwaọrụ.
Apple kwenyere na irube isi n'ụdị ọchịchọ a ga-esetịpụrụ ụkpụrụ peligroso nke nwere ike iduga nbudata nzuzo nke ezoro ezo na smartphones na ngwaọrụ eletrọniki ndị ọzọ. Na Ngalaba Okwu Ikpe nke US agbaghaala nchegbu Apple, na-akpọ ụjọ ya "overblown" ma na-ekwusi ike na arịrịọ dị otú ahụ agaghị eduga na "isi isi".
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Barack Obama na-ekwu maka ihe nzuzo Apple
Apple mepee Applelọ Ahịa Apple ọhụrụ na China
Steve Wozniak na-eche Amazon Echo ga-abụ nnukwu ntanetị ntanetị ọzọ